आन्विका गिरी - Anbika Giri Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: आन्विका गिरी – Anbika Giri
~आन्विका गिरी~ जगदिश घिमिरेको लिलाम उपन्यास पढिसकेपछी मैले मार्च २००९ तिर यो लेख लेखेको थिए! भावना बगेर लेखे जस्तो लाग्छ, तर मेरो देशप्रतिको मेरो भावनामा हिजो, आज र भोलीमा फरक यति मात्र हुनेछ कि हिजो भन्दा आज र आज भन्दा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : पुस्तक समीक्षा	| Jagdhish Ghimire, आन्विका गिरी - Anbika Giri	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
कथा : चन्द्रीको नम्बर
~आन्विका गिरी~ “यो सब तेरै कारणले हो”, जगन्नाथले सकुन्जेल भकुरे। हरिमायाले चूँसम्म गरिनन्, मात्र आँशु झारेर बसिन्। एकैछिन अघि जगन्नाथले मुस्कुराउँदै हरिमायाको हातबाट चिया लिएका थिए। बिहानको नित्यकर्म सकेर पात्रो पल्टाउँदै गरेका उनलाई हरिमायाले सधैं झ्ैं कोठामै चिया पुर्‍याइदिएकी थिइन्। … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : फेरि रोल्पा
Sahitya - sangrahalaya | April 25, 2014
~आन्विका गिरी~ ढोकाको सानो प्वालबाट घरबेटीको गञ्जीका दुई वटा प्वाल देखिए। संसारमा यही एउटा मान्छेलाई म अनुहार नहेरी चिन्न सक्छु। खाना नखाँदै आएको भए मेरो दिक्क लाग्दो अनुहार उसले हेर्नै पर्थ्यो। रमला अफिसको कामले बाहिर गएकीले एकसातादेखि खाना बनाएर म … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : रुपान्तरण
~आन्विका गिरी~ ऋषिकेश घर फर्कंदा रातको ११ बजिसकेको थियो। स्वास्नी टीभी खुल्लै राखेर झ्काएकी थिई। छोराछोरी झुलभित्र सुतिसकेका थिए। एउटा मच्छरले झुलमा टाँसिएको छोरीको गालामा रजाइँ गरिरहेको देखेर उसको पारा तात्यो, “साला!” उसले हान्दा नहान्दै मच्छर फुर्र भयो, छोरी पो … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : मृत्यु : अस्ति, हिजो र आज
~आन्विका गिरी~ कसैको रुवाइ बिस्तारै चर्किंदै गएपछि मेरा आँखाहरू आफसेआफ खुले । आँखा खोल्दा कोठा अँध्यारो थियो । सबैभन्दा पहिला सदाझैं मैले आमालाई छामे । आमा हुनुहुन्नथ्यो । अनि मलाई पक्का भो, उज्यालो भएछ । जाडो बढ्दै गएकाले हुस्सुले छिटो … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : पार्कमा एक घण्टा
~आन्बिका गिरी~ केटोले केटीको ओठमा ओठ राख्न लाग्दा सम्म मैले हेरीरहे । केटीका आँखा बन्द थिए । जब उसले राख्यो नै तब मलाई अचानक खोकी आयो । मैले खोके, दुबै झस्किए । केटी लजाई, केटो रिसायो । यस्तो लाग्थ्यो उसले … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : कम्युनिष्ट
~आन्विका गिरी~ म कम्युनिष्ट बनूँ, उसको चाहना यत्ति थियो! मैले कस्तो लुगा लाए सुहाउँछ, कस्तो कपाल काट्नुपर्छ, दाह्री राख्न हुन्छ/हुन्न, कुन स्याम्पू लगाउनुपर्छ― यस्ता कुरा कहिल्यै भनिन। उसले मलाई सारै आग्रह गरेर एउटै कुरा भनी, “तपाईं कम्युनिष्ट बन्नुस् न है!” … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : बेपत्ता
~आन्विका गिरी~ उसको एउटा तस्बिर पनि थिएन। म कहिलेकाहीँ उसको बाक्लो आँखीभौं सम्झ्न्थें र त्यसै त्यसै गल्थें। उसलाई आफ्नो आँखीभौं त्यतिविधि बाक्लो भएकोमा सारै पीर थियो। आमाको, बुबाको, मेरो, काकाको कसैको पनि आँखीभांै त्यस्तो थिएन। हजुरबुबाको पो थियो कि? ऊ … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →